African-American and Zimbabwean women live and do theology from different cultural and contextual worldviews, although they share the same skin colour. The narrative stories of three Zimbabwean and one African-American Christian women and how they share inter culturally the struggle of identity, identity-formation and survival/liberation while maintaining their cultural uniqueness form die basis of this research project. These shared experiences can offer significant contributions to the broader feminist liberation theology. The Christian faith has served as a shared source of sustenance, resilience, healing and renewal as well as a shared source for constructive and affirming identity-formation for Zimbabwean and African-American women. Consequently, building strong relationships that address contextual issues facing women of Africa and the Diaspora, as suggested by this research, offers significant opportunities for eliminating some of the barriers and boundaries that prevent Zimbabwean and African- American women from enjoying the quality of life that God meant for everyone.
Citation: Gourdet, Sandra (2009) Intercultural communication between African-American and Zimbabwean women: focussing on identity and survival/liberation, University of South Africa, Pretoria, <http://hdl.handle.net/10500/1028>
Name: dissertation_gour ...